Ny fototry ny fanafana, torohevitra azo ampiharina | Nutri Diet
Fausto Ramirez | | Fanatanjahan-tena sy fanatanjahan-tena, fahasalamana
Ampifanaraho ny manafanafana amin'ny fotoana fanaovana bodybuilding dia zavatra ilaina sy mahomby. Ny hafanana dia tsy maintsy mivoatra arakaraka ny hozatra hiasa. Ireo izay angatahina aminao ihany no hafanainao, fa tsy maintsy ataonao tanteraka, izany hoe izy roa hozatra Kilonga ary koa ambaratonga faharoa. Izy io dia momba ny fampifangaroana ny hamafin'ny fanafanana amin'ny an'ny fivoriana. Raha ny fiofanana mitaky izany fa handeha, mila miomana arak'izany.
Mafana miandalana. Mila manomboka moramora ianao, manao kardio kely, ary avy eo mandroso hetsika manokana kokoa hanaitra ny hozatra. Rehefa mihamafana ny vatana dia tsy maintsy ampitomboina ny hamafiny. Ny momba ny fandrosoana amin'ny hafainganam-pandeha mety indrindra aminao, fa tsy manandrana mandeha haingana loatra hisorohana ny fahasimbana, mitazona a ezaka milamina ampy tsy hangatsiaka. Amin'ny faran'ny hafanana, tokony hatsembohana kely ianao.
Araraoty manafanafana miasa ireo teboka malemy. Izy io dia ny fanitsiana ny lesoka, ary ny fanatsarana ny teknikan'ny famonoana azo antoka hetsika. Ohatra, ny toerana misy ny lamosina, ny valahana ary ny lohalika na ny soroka rehefa manao, ohatra, ny fampiakarana ny lanjany amin'ny dabilio mirona.
Na ahoana na ahoana, tsy tokony handeha lavitra ny olona. Dingana tetezamita eo amin'ny fitsaharana sy ny fipetrahana, izany no antony manafanafana tsy maintsy miomana amin'ny ezaka vita amin'ny dokambarotra izy fa tsy manolo azy.
Vantany vao vita dia voafatotra rojo vy mivantana amin'ilay fandaharana. Tsy tokony hatao ny miato kely, satria ilaina ny mitahiry ny hafanana azo, satria raha tsy izany dia ho very ny tombony azo avy amin'ny fanafanana.
ny mamelatra ilaina mandritra ny fanafanana, indrindra raha miditra voalohany ianao Fitness. Ho an'ireo izay te-hanao fihetsiketsehana sasany dia asaina miandry ny fiafaran'ny fanafanana, rehefa mafana ny hozatra, alohan'ny hanombohana ny fivoriana voalaza manokana.
Momba ny famerana mamelatra voasakantsakan'ny farafahakeliny farafahakeliny, miaraka amina hetsiky ny hazavana vitsivitsy, tazomina vitsivitsy monja. Raha lasa lavitra ianao dia mampihena ny fiasan'ny hozatra.
Ny filamatra dia mamelatra mavitrika, mifanaraka tsara amin'ny fanomanana ny ezaka. Na izany na tsy izany, tsy tsara ny manitatra ny hamafin'ny fihetsiketsehana izay atao, satria mety hihoatra ny fanatratrarana ny a hozatra ary noho izany dia mandratra tena.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » fahasalamana » Fanatanjahan-tena sy fanatanjahan-tena » Ny fototry ny hafanana, torohevitra mahasoa
Torohevitra efatra hanatsarana ny toe-tsainao ary hananana metabolisma mahomby kokoa